မိတ္ထီလာ မတရားပွဲ မိုးကြိုးကြောက်လို့ တရားနာမဲ့သူမရှိ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မိုးကောင်းကင်စက် ဝဠာထက်ဝယ် ဂြိုဟ်ခုံ အများ လျှက်ခါသွားလျက် လားလားမတိုက် မထိခိုက်ဘူး
သတ္တိပြောင်မြောက်လှတဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ကြီးကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ကြပါစို့- »
မိတ္ထီလာ မတရားပွဲ မိုးကြိုးကြောက်လို့ တရားနာမဲ့သူမရှိ
Maung Maung Skw ရေးသားသည်။.
မိတ္ထီလာ မတရားပွဲ မိုးကြိုးကြောက်လို့ တရားနာမဲ့သူမရှိ-
မိတ္ထီလာမှာ ၀ီရသူနဲ့ အပေါင်းပါများက မတရားပွဲ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်-
ကျွန်တော်လဲ သတင်းရရခြင်း တကမ္ဘာလုံးက သတင်းသမား တွေသိအောင် ကြေငြာပေးခဲ့ပါတယ်-
အားလုံးကလည်း မိတ္ထီလာက ၀ီရသူတို့ အဖွဲ့ရဲ့ လှုတ်ရှားမှု ကို စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်-
မနေ့က ပထမနေ့ ဟောသွားတဲ့ကိုယ်တော်ကတော့ ဘာသာရေး ပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်ဘဲ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ သဘသနာအပေါ်လိုက်နာစောင့် ထိန်းပုံနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ မေ့မေ့လျော့လျော့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေကြပုံတွေကို ချိန်ထိုး ပြသွားတယ် လို့ သိရပါတယ်-
ဒီကနေ့ ဟောမဲ့ ကိုယ်တော်ကတော့ ဘာတွေ ဟောဖို့ ပြောဖို့ စီစဉ်ထားလဲမသိပါဘူး-
ညနေ နေမ၀င်ခင်က စပြီး ရွာလိုက်တဲ့မိုး-ခုချိန်အထိ မတိတ် သေးဘူး- တရားနာ ပရိသတ်လဲ တရားပွဲ မလာကြလို့-
အသံချဲ့စက်တွေနဲ့ ရပ်ကွက်တွေထဲ လိုက်လံ အော်ဟစ်ခေါ် ယူနေပေမဲ့- မိုးနဲ့ လေနဲ့ ဘာတွေဟောမလဲမှမသိတာ-မိုးကြိုး အပစ်ခံရမှာ ကြောက်တယ်-ဆိုပြီး တရားပွဲခင်း လူမ၀င် ဟုသိရပါတယ်-
မနက်ဖန် ၀ီရသူ့ အလှည့်-
ဘာတွေပြောမလဲ-ဟောမလဲဆိုတာကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း- သိစေအပ်ပါသည်-
This entry was posted on November 6, 2014 at 8:06 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.